वजेट फ्रिज होइन अरु बजेट चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छौ - Tulsipur Online
वजेट फ्रिज होइन अरु बजेट चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छौ
Posted by Admin | १८ पुष २०७४, मंगलवार १५:०२ |
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको ६ महिना नाघिसकेको छ । जनप्रतिनिधि आए विकासले गतिलिने आशा गरेका नागरिकहरु तत्काल परिणामको आशामा छन तर जनचाहनाअनुसारको काम भएको देखिदैन । जनअपेक्षाअनुसार काम हुन किन सकेको छैन वा नयाँ संरचनामा आधार तयार गर्दागर्दै दिन वितेको छ यसैसन्दर्भमा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीसंग तुलसीपुर अनलाईनकर्मी निमुसँगम घर्ती सँग गरिएको कुराकानी यहा प्रस्तुत गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका दैनिक गतिविधि के भइरहेका छन ?
जनताका दैनिक जीवनसंग जोडिएका कामहरुलाई हामीले छिटो छरितोरुपमा सम्पादन गर्दै आइरहेका छौ । कुनै उपमहानगरपालिकाकाकै कार्यालयबाट हुन्छन भने कुनै सम्वन्धित वडा कार्यालयबाट पनि हामीले प्रशासनिकलगायतका काम गरिरहेका छौ । खासगरी सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यसवर्ष धेरैजसो वडाका कार्यालयहरु स्थापना गर्ने चरणमा लागेका छौ । कार्यालय नभएका वडाहरुमा यसैवर्ष कार्यालय स्थापना गर्ने वजेटको विनियोजन भइसकेको छ र आउने बैठकबाट नै निर्णय गरेर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसैगरी एकिकृत सम्पत्ति कर बुझाउन जनतालाई सहज होस भनेर प्रत्येक व्यक्तिका फाइल खोज्नुपर्ने झण्झटिलो अवस्थालाई अन्त्य गर्दै हामीले सम्वन्धित व्यक्तिलाई नै फाइल हस्तान्तरण गरेका छौं र कर बुझाउन आउदा न्यायपूर्ण होस भनेर डिजीटल टोकन प्रणालि समेत लागु गरीसकेका छौ । हामीसंग कर्मचारी अभाव छ जे छ त्यही जनशक्तिबाट हामीले सेवालाई सहज बनाउने प्रयास गरेका छौ ।
आज हुने काम भोली आउनु भन्ने अवस्थाको अन्त्य भयो त ?
सामान्यतयाः प्रक्रिया पुरा गरी आएका जनताका कामलाई तत्काल गर्दै आएका छौं । कतै ढिलासुस्ती भएको छैन । कतै त्यस्तो भएको जनगुनासो आए तुरुन्तै सम्वोधन गर्छौ । तर पुग्दो जनशक्ति नहुदा जनअपेक्षाअनुसारकै काम गर्न कठिनाई भइरहेको छ तर पनि नियतबश हुने ढिलासुस्ती कतै भेटिए तत्काल एक्सनमा जान्छौ ।
घोराही उपमहानगर अलि सुस्त गतिमा हिड्यो भन्ने गुनासो सुनिन्छ त ?
दैनिक सेवा प्रवाहमा हामीले चुस्तता ल्याएका छौ । जनताले तुरुन्तै परिणाम खोजीराख्नु भएको छ । हामीले त्यो परिणाम दिने खालका काम गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले पनि अवरोध सिर्जना ग-यो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सवै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिर नै लाग्नु प¥यो । निर्वाचनपछि हामीले त्यस्ता परिणाम देखिने खालका धेरै कामहरुलाई अघि बढाइसकेका छौ । हामीले भौतिक संरचना निर्माणका कामहरु अघि वढिसकेका छन । नयाँ पुराना योजना निर्माण तथा कानुन बनाउने काम पनि भएका छन । नगर प्रोफाइल बनाउने कुरा एकचरणको काम अघि बढिसकेको छ । एशिया फाउण्डेशनले त्यो काम गर्नेछ जसले नगरको वस्तुगत अवस्था के हो भन्ने कुरा दिनसक्छ । त्यस्तै नगरको गुरुयोजना निर्माणकालागि पनि कार्यदल गठन गरेर काम थालिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरिएका योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने दिसामा हामी छौ ।
विशेषगरी बाटोलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौ । हरेक वडामा बाह्रै महिना चौविसै घण्टा यातायात सूचारु गर्ने गर्नुपर्छ र वडा कार्यालयदेखि नगरको केन्द्रभागसंग जोड्ने मान्यताअनुसार कामलाई तीव्रता दिइएको छ । यसैवर्ष धेरै बाटाहरु कालोपत्रे हुदैछन । यसैवर्ष कुइरेपानीदेखि सर्रासम्मको बैकल्पिक मार्गको सर्भे भइसकेको छ । बजेट विनियोजन भएको छ अव छिटै काम गर्नकालागि टेण्डर गर्दैछौ । त्यस्तै नगरभित्रका विभिन्न सडक कालोपत्रेकालागि सर्भे भइसकेका छन । कतिपय उपभोक्ताहरुले गर्दैहुनुहुन्छ भने कतिपय टेण्डरमार्फत गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै पाँच करोडको लागत सहभागितामा गर्ने योजनाहरु आउने बैठकबाट छनौट गरिसक्नेछौ । त्यसकारण छिटै विकासको परिणाम हामीले जनतामाझ ल्याउनेछौ । वडाबाट छानिएका सवै योजना कार्यान्वयनमा गइसकेका छन । वजेट पनि छ र यसवर्ष राम्रो परिणाम आउनेगरी काम भइरहेको छ ।
वजेट धेरै आउने तर काम नहुने त होइन ?
त्यस्तो हुदैन । वजेट फ्रीज हुने दिइने छैन । जेठ भित्रै सवै काम सम्पन्न गर्नेगरी हामी लागेका छौ । हामीलाई विश्वास छ त्यसमा आम उपभोक्ता तथा जनताको साथ हुनेछ । वजेट फ्रिज हुने होइन बरु अरु बजेट चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौ ।
वडा कार्यालयलाई आर्थिक अख्तियारी रोकेर कसरी छिटो छरितो काम होला त ?
नयाँ संविधानले जुन खालको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यो अनुसारको ऐन अझै बनिनसकेको अवस्थाले केही समस्या आएका छन । अधिकारको हिसावले त गाउमै सिंहदरवार ल्याइएको छ । तर केही कानुनी अड्चनले व्यवहारमा पूर्ण लागु गर्न समस्या भएको छ । अव केन्द्र र प्रदेश सरकार बनेपछि ती ऐन कानुनले पूर्णता पाउनेछन र हामीले भनेकै अधिकार व्यवहारमा पाउनेछौ । अहिले पनि हामीलाई राज्यले पुग्दो कर्मचारी दिन सकेको छैन । वडा कार्यालयमा कम्तीमा एकजना अधिकृत स्तरको कर्मचारी, लेखापाल, कम्युटर अपरेटर, मुखिया र एउटा कार्यालय सहयोगी चाहिने हो । तर अहिले पहिले जे थिए उनीहरुलाई नै बाडफाड गरेर काम चलाउनुपर्ने वाध्यता छ । यो अवस्थामा राज्यले नै आर्थिक अधिकार दिन नसकेको अवस्था हो । तर केही दिनमै कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ भन्ने सुनेको छु । यो सधै रहनेछैन ।
जनताले महशुस गर्ने के काम भए जनप्रतिनिधि आएपछि ?
खासगरी हामी आइसकेपछि सुधारका काम गरिएको छ । हामीले सरसफाईलाई अघि बढाएका छौ । प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते सरसफाई गर्ने अभियान थालेका छौ । जहाँ सम्वन्धित क्षेत्रकै टोलवासीहरुको सहभागितामा यो काम भइरहेको छ । घोराहीमा फोहरलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । हामीले गल्ने र नगल्ने फोहर छुट्याउन भनेका थियौ नगरवासीहरुले हामीलाई साथ दिनुभएको छ । फोहर व्यवस्थापन गर्ने कुरा आफनै सरसफाई गर्नु हो भन्ने कुरालाई सवै नगरवासीमाझ स्थापित गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौ । फोहरलाई समस्याको रुपमा भन्दा पनि मोहरमा परिवर्तन गर्ने प्रयासमा छौ हामीहरु । जस्तो गल्ने फोहरबाट ग्याँस उत्पादन गर्नकालागि टेण्डर गरेका थियौं । टेण्डर परेर त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
हामीले फोहरबाट उत्पादन गरेको ग्याँस सिलिण्डरमा भरेर बजारमा पठाउनेछौ । आउदो एकवर्षभित्र यो काम हुन्छ । प्लाष्टिक व्यवस्थापनकालागि पनि हामी लागेका छौ । पुनःप्रयोग गर्ने खालका वस्तुको गे्रडिङ गरेर विक्रि गर्नेस्तरसम्म पु-याउन प्रयास गरिरहेका छौ । सकेसम्म जिरो ल्याण्डफिलसाइडसम्म पुग्नेगरी अघि बढेका छौ । यसैगरी ट्राफिक जाम, अव्यवस्थित फुटपाथका बजारहरु थिए यसलाई पनि हामीहरुले क्रमश विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा हामी लागेका छौ । ठेला व्यवसायी, सडकमा विक्रि गर्न राखिएका तरकारीलाई व्यवस्थित गर्न एकखालको मण्डिजस्तै हाटवजार सञ्चालन गरिरहेका छौ । त्यस्तै मासु व्यवसायलाई व्यस्थित गर्न बधशालाकालागि बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छौ । त्यसको सर्भे भइरहेको छ । त्यस्तै बजारमा रहेका सिसी क्यामेरा मर्मत भइरहेका छन भने मुख्य सडक फोरलेन बनिरहेकाले विद्युतका पोल सार्नुपर्ने भएकाले केही सिसी क्यामेरा सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।
सडक वक्तिकालागि सोलार सूचारु गर्न थालिएको छ । त्यस्तै घोराहीमा प्रदुषणको पनि समस्या छ । यहाँ सिमेन्ट उद्योग भएकै कारणले पनि प्रदुषण थपिएको छ । कति प्रदुषण छ भन्ने नाप्ने यन्त्र अहिलेसम्म हामीसंग छैन । तर आउदो एकमहिनाभित्र घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रदुषण मापनकालागि वातावरण मन्त्रालयबाट यन्त्र आउदैछ । त्यसपछिमात्रै यहाँको प्रदुषणको अवस्था थाहा हुनेछ । यहाँ उद्योग चलाउनुपर्छ तर जनताको स्वास्थ्य जोखिममा पारेर कुनै पनि उद्योग चलाउन पाइदैन । चलाउने हो भने वातावरण सन्तुलन कायम गरेरमात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने कुराको आधारमा हामी काम गर्दैछौ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सरकारी नियमअनुसार बैंकमार्फत दिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन वडा वडामा पुगेर बैंक खाता खोल्न सम्वन्धित बैंकलाई अनुरोध गरेका थियौं । केही गुनासा आएका छन । खासगरी बैंकमा लामो लाइन लागेर भत्ता लिन आउनुपर्ने अप्ठेरोलाई न्यूनिकरण गर्न उहाँहरुको छुटटै लाइनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छौ । त्यस्तै कर संकलनको काम पनि वडा वडाबाटै गर्ने सोच बनाएका छौ । त्यसलाई थप सहज बनाउन सवै वडामा इन्टरनेट जडान गरेर कम्युटर सिस्टमबाटै धेरै काम गर्ने योजनामा हामी लागेका छौ ।
चुनावमा उठाएका नारा के लागु भए ?
थुप्रै कुरा भएका छन । खासगरी सामाजिक सुरक्षाका कुरालाई हामीले लागु गरेका छौ । ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई घरघरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात गरेका छौं । त्यसलाई निरन्तरता दिन कार्यक्रम बनाएका पनि छौ ।
उपमहानगरलाई कस्तो बनाउने केही सपना देख्नुहुन्छ ?
अवस्य पनि । पहिलो कुरा त घोराही उपमहानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउछौ भनेका छौ । हरित नगर बनाउछौ भनेका छौ । कृषिलाई व्यवस्थित गर्दै आत्मनिर्भर नगर बनाउछौ भनेका छौ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने सपना देखेका छौ । यी सवै कामको सुरुवात भइसकेका छन । घोराहीका धेरै ठाउँमा ड्याम निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौ । कतिपय बनिसकेका छन मर्मत गर्नुपर्ने छ कति नयाँ बनाउनुपर्ने छ यसै आर्थिकवर्षमा धेरै ड्याम बन्दैछन । घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र पानी संकलन र रिचार्जको काम मात्रै होइन यसलाई एउटा पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नकालागि ति ड्यामहरुलाई विकास गरिनेछ । बहुउद्देश्यीय रुपमा माछा पालन, खानेपानी सूचारु गर्ने र सिंचाईको व्यवस्था पनि होस भन्ने उद्देश्यले ड्याम निर्माणको काम हुदैछ । घोराहीलाई व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्न चाहेका छौ । हिजो रोकिएका बाटोहरु पीच हुन थालेका छन ।
हुन त त्यति गति लिन सकेको छैन तुलनात्मक रुपमा काम भएका छन । यीनलाई छिटो छरितोरुपमा निर्माण गर्न दवाव सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । कटुवाखोला, गुर्जेखोलालगायतका पुल निर्माणको काम सुरु भैसकेको अवस्था पनि छ । त्यस्तै यहाँका मठमन्दिरहरुको संरक्षणको काम पनि सुरुवात भएका छन । धारपानी मन्दिरको गुरुयोजना, सर्वोदय पुस्तकालयको गुरुयोजना बनाउने भनेका छौ । त्यस्तै बाह्रकुनेको विकासकालागि चालु आर्थिक वर्षमा डिपीआर तयार गरी आगामी वर्ष ठूलो योजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै यसवर्ष ६÷७ वटा स्वास्थ्य क्लिनिक निर्माणकालागि प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा छौ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना छ । शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षक छनौट कार्यविधि पास गरिसकेका छौ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नकालागि नीति निर्माण गरेर अघि बढ्ने कोशीस गरिरहेका छौ । त्यस्तै कृषिमा पनि कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका छन । मान्छेहरुलाई लघुउद्यमतिर प्रोत्साहित गर्नकालागि तालिम दिने, युवाहरुलाई स्वरोजगार गराउने कुरा र पर्यटकिय क्षेत्रको विकासमा पनि हामी विशेष जोड दिएर अघि बढ्नेछौ ।
विषयगत युनिट थपिएका छन उपमहानगरमा काम भएको छ कि अलमल छदैछ ?
यतिवेला कृषि,शिक्षा, स्वास्थ्य,घरेलु भेटेरेनरी जस्ता कार्यालयबाट युनिटहरु उपमहानगरपालिकामा आएसकेको अवस्था छ । हाम्रो मातहत आइसकेका युनिटहरुलाई शाखा, महाशाखाको रुपमा व्यस्थितरुपले सञ्चालन गर्नकालागि भवनको व्यवस्था गरेर व्यवस्थित गर्नतिर लागेका छौ ।
नगरवासीलाई केही अनुरोध गर्नु छ कि ?
हामीले विभिन्न कामहरु अघि बढाएका छौ । उपमहानगरवासीहरुलाई आफ्नो ठाउमा भइरहेका कामप्रति चासो राख्दिन र काममा सहयोग तथा खवरदारी गरिदिनकालागि मेरो आग्रह छ । आउदा दिनहरुमा सवैको सल्लाह सुझावका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्न पनि चाहन्छु ।
Previousचोरी मुद्धाका फरार एक जना पक्राउ
Nextनेपालका आँखा अस्पतालमा भारतीय विरामीको चाप